Agasti 2020 - I-SunTrust Blog
Inyanga: August 2020
Imilayezo kaBoss 'Ngiyabonga Yabasebenzi: Amanothi angama-65 wokuthokozisa kakhulu
By UVictoria Akpan TMLT August 31, 2020 Indlela yokuphila 0 Amazwana
Imilayezo kaBoss 'Ngiyabonga Yabasebenzi: Amanothi angama-65 wokuthokozisa kakhulu. Imiyalezo kaBoss 'Thank You for Employees: Wonke amabhizinisi adinga ukuqiniseka ukuthi abasebenzi bawo bayiqembu elijabulayo. Ukugqugquzelwa kwabasebenzi kudlala indima enkulu enqubweni yokwakhiwa kwethimba. A ...
Imibono Yesimemo Seqembu Lephuli: Imibono Ejabulisayo Engama-30 Yokumema I-F & F yePhathi Lehlobo
By UVictoria Akpan TMLT August 31, 2020 Indlela yokuphila, Photography, Izikhangibavakashi 0 Amazwana
Imibono Yesimemo Seqembu Lephuli: Imibono Ejabulisayo Engama-30 Yokumema I-F & F yePhathi Lehlobo. Imibono Yokumema Iphathi Yephuli: Izimemo zephathi yephuli ziyindlela ephelele yokubalekela ukushisa kwehlobo. Kuhlanganiswe nokucwilisa kubhavu opholile, i ...
Amazwi Ekhadi Lokubonga Lebhizinisi: Ukukhetha Okumangalisayo Okungu-65
Amazwi Ekhadi Lokubonga Lebhizinisi: Ukukhetha Okumangalisayo Okungu-65. Amazwi Ekhadi Lokubonga Lebhizinisi: I-Thanksgiving ifika minyaka yonke futhi sekuyisikhathi sokuthi abanikazi bezinkampani babonge abahlinzeki babo, abahlinzeki, abaholi bamaqembu, abaxhasi kanye nawo wonke umuntu onomthelela kulokhu ...
Amazwi ahlekisayo aseYiddish: Ama-Quotes angama-65 amahle kakhulu we-Yiddish, izisho nezisho
Amazwi ahlekisayo aseYiddish: Ama-Quotes angama-65 amahle kakhulu we-Yiddish, izisho nezisho. Izisho Ezihlekisayo ZaseYiddish: IsiYiddish sithathwa njengomphakathi onothile wezilimi. Wazalelwa ngesiHeberu nangesiJalimane, isiYiddish sinamagama amaningi nemisho ethile esetshenziswa lapho kudingeka ...
Imiyalezo Yokuzwela Nezenkolo: Izinqumo Ezingcono Ezingama-65
Imiyalezo Yokuzwela Kwezenkolo Nenduduzo: Izinketho ezihamba phambili ezingama-65. Imiyalezo Yokuzwela Kwezenkolo Nenduduzo: Uma unikeza ikhadi noma umyalezo wokuzwelana nomuntu omaziyo ukuthi uyinkolo noma ubambe imibono yenkolo ngokuqinile, ungahle uthande ukuphakamisa ukuthi kusetshenziswe ...
Ikhadi Lokuzalwa lisuka Endodakazini liya Kumama: Izifiso Ezingama-65 Ezivelele Zomama
Ikhadi Lokuzalwa lisuka Endodakazini liye Kumama: Izifiso Ezingama-65 Ezivelele Zomama. Ikhadi Lokuzalwa lisuka Endodakazini liya Kumama: Kunezinhlobo eziningi zobudlelwano, enye yezinto eziphawuleka kakhulu ukuba ngumama-ndodakazi. Uma uthola umama omkhulu awusoze walindela ...
Umlayezo wokuvalelisa kwabaqashi kubasebenzi: Amaqoqo angama-65 ahamba phambili
Umlayezo wokuvalelisa kwabaqashi kubasebenzi: Amaqoqo angama-65 ahamba phambili. Umlayezo wokuvalelisa kwabaqashi kubasebenzi: Kungaba nzima kumqashi ukuthola amagama afanele okuthumela umyalezo wokuvalelisa kumqashwa oshiya inkampani yakho. Ufuna ukubhala ...
Imilayezo Yosuku Oluhle kaBoss: 65 Imibono Engcono Kakhulu Yokukhombisa Olunye Uthando
Imilayezo Yosuku Oluhle Lomphathi: Imibono Engu-65 Engcono Kakhulu Yokukhombisa Olunye Uthando. Imilayezo yosuku olujabulisayo: Umqashi wakho udlala indima ebaluleke kakhulu emsebenzini wakho. Bangaphezu nje kwe-figurehead noma umuntu osayina i-paycheck yakho. Singaba nenkulu ...
Amazwi amahle kakhulu we-Bugs Bunny: Ama-Quotes ama-Bugs Bunny angama-65 ahlekisayo
Amazwi amahle kakhulu we-Bugs Bunny: Ama-Quotes ama-Bugs Bunny angama-65 ahlekisayo. Amazwi amahle kakhulu we-Bugs Bunny: I-Bugs Bunny ingumlingiswa opopayi opopayiwe owenziwa nguLeon Schlesinger Productions ekuqaleni futhi wakhulunywa nguMel Blanc odumile. Iziphazamisi uBunny uvele kwinombolo ...
Izisho Zezimpawu Ezifushane Zesonto: Izimpawu ezingama-90 ezihamba phambili ze-Hilarious Church
Izisho Zezimpawu Ezifushane Zesonto: Izimpawu ezingama-90 ezihamba phambili ze-Hilarious Church. Izisho Zezimpawu Ezifushane Zesonto: Wonke umuntu uthanda uphawu oluhlekisayo futhi amahlaya avame ukutholakala ezindaweni ongalindelanga ukuthi kube yizo. Amasonto, ikakhulukazi, anendlela yokunikezela ngokuzenzekelayo ...